LUNGISA AYIKWAZI UKUFAKA UHLAZIYO LOMQHUBI NGAMAVA EGEFORCE - ITHAMBILE
Lungisa ayikwazi ukufaka uHlaziyo loMqhubi ngamava eGeForce: Khange ndikwazi ukuhlaziya abaqhubi bekhadi lemizobo le-NVIDIA ngamava eGeForce, yiyo loo nto kufuneka ndifumane enye indlela ethi ikhuphele abaqhubi ngesandla kwaye ibahlaziye. Ingxaki ilele kwiGeForce yamava ikhonsoli engazi ukuba yintoni, endaweni yokuchitha ixesha elininzi masibone indlela yokuhlaziya ngesandla abaqhubi beNvidia.
Uhlaziyo lweWindows aluxhumeki kwi-intanethi
Hlaziya ngokwakho uMqhubi kuMphathi weDivayisi
1 Okokuqala, kufuneka uyazi ukuba yeyiphi i-graphic hardware onayo okt yeyiphi ikhadi lekhadi le-Nvidia onalo, ungakhathazeki ukuba awazi ngalo njengoko linokufumaneka lula.
Cinezela i-Windows Key + R kunye nebhokisi yencoko yencoko yohlobo lwe-dxdiag kwaye ungene kwi-Enter.
3. Emva kokhangelo lwethebhu yokubonisa (kuyakubakho iithebhu ezimbini zokubonisa enye yecrafti yekhadi elihlanganisiweyo kwaye enye ibe yekaNvidia's) cofa kwithebhu yokubonisa kwaye ufumane ikhadi lakho lemizobo.
le ndawo ayinakufikelelwa nge-err_connection_timed_out
Ngoku uye kumqhubi weNvidia khuphela iwebhusayithi kwaye ufake iinkcukacha zemveliso esizifumeneyo.
5.Khangela abaqhubi bakho emva kokufaka ulwazi, cofa uvume kwaye ukhuphele abaqhubi.
Emva kokukhuphela ngempumelelo, faka umqhubi kwaye uhlaziye ngempumelelo abaqhubi bakho beNvidia ngesandla. Olu fakelo luya kuthatha ixesha kodwa uya kuhlaziya ngempumelelo umqhubi wakho emva koko.
Ukuba le ndlela ingentla ayisebenzi kuwe ke zama enye indlela:
1, cofa ngasekunene Le PC okanye Ikhompyuter yam kwaye ukhethe Iipropati .
Ngaphakathi Iipropati Cofa apha Umlawuli wesixhobo .
3.Cofa ekunene kwaye usebenzise uHlaziyo loMqhubi weSoftware kwifayile ye- Umboniso okanye Iadaptha yemizobo esemgangathweni yeVGA kuluhlu lwakho lwezixhobo.
4.Point kwindlela ekhishwe kwifolda yomqhubi weNVIDIA (umz. C: NVIDIA DisplayDriver xxx.xx windows_version IsiNgesi Display.Driver ). Ukuba le folda ayikho, awuzange usebenzise isifaki ngaphambili.
5.I-PC yokuqalisa kwakhona ngokutsha kunye nabaqhubi kufuneka ihlaziyiwe.
windows 10 ukuphucula umncedisi onamathele kufakelo olungama-99
Yiyo loo nto uphumelele ukuLungisa ungakwazi ukufaka uHlaziyo loMqhubi ngeGeForce yamava kodwa ukuba usenemibuzo nceda uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
num lock ayisebenzi windows 10
iifestile ezili-10 aziyi kuvulwa
ayithunyelwanga kodwa zama kwakhona
iiwindows zihlala kwi-imeyile aziyi kuvulwa
lungisa isikrini esimnyama ngesikhombisi windows 10